Aqoonkaab Dhakhtarada haweeney walba u baahan tahay | Aqoonkaab
Dhakhtarada haweeney walba u baahan tahay
Joogteynta caafimaadka ee gabadh walba waa mid leh muhiimad khaas ah. Dumarku waxay maraan heerar kala duwan noloshooda kuwaasoo ka bilaabma caruurnimo, qaangaarnimo, xiliyada uur qaadista, dhalmada iyo ilaa heerka ugu danbeeya ee dhalma joojinta. Waqtiyada iyo koriimada isbedelaysa ayaa sababaya in haweeney walba ay u baahato daryeel caafimaad oo dhamays tiran heer walba oo ay ku jirto. Qormadaan waxaan ku eegaynaa dhakhaatiirta lagama maarmaanka u ah haweeneyda iyadoo laga tusaalo qaadanayo hadba xiliga ama da’da ay ku jirto iyo su’aalaha lagama maarmaarnka ah ee loo baahan yahay inay weydiiso dhakhtarka.
Waa dhakhtar ku taqasusay xubnaha taranka ee haweenka. Sida caadiga ah waxaa khubarada caafimaadka ku taliyaan in gabadhu booqoto dhakhtarkaan, marka ay da’deedu u dhaxayso 15 ilaa 21 sano xataa hadii aysan isku ogeyn wax astaan caafimaad darro ah. La kulanka dhakhtarkaan xiliyada qaangaarnimada gabadhu waxay ka micno tahay in gabadhu ay kala tashato koriimadeeda, waxyaabaha galmadda la xariira ee keeni kara caafimaad darrada, digtoonida galmada, macquul ahaanshaha taranka, dhismaha mooraalka iyo talooyin ku aadan sidii ay u noqon lahayd mid ku guursata xiliga ku haboon. Su’aalaha loo baahan yahay in gabadhu ay weydiiso dhakhtarka noocaan ah waxaa kamid noqon kara;
Baaritaano noocee ah baan u baahanahay?,
Imisa jeer baan u baahanahay inaan sameeyo baaritanadaan?
Waxaa i xanuujiya caadada, sidee xanuunkaas wax uga qaban karaa?
Dhiig badan/yarbaa iga baxa xiliga caadada, ma caadibaa?
Waa dhakhtar ku taqasusay uurka iyo dhalashada ilmaha, waa dhakhatar ay isku dhawyihiin kuwa barta xubnaha taranka ee haweenka. Waxaa muhiim ah in haweeney walba oo uur leh ay la xiriirto dhakhtar noocaan ah, daryeelka hooyada uurka leh maahan mid ka maarma la kulanka dhakhtarkaan. Waxuu dhakhtarkani ka caawinayaa hooyada uurka leh xaaladaha kala duwan ee soo wajaha. Su’aalaha looga baahan yahay hooyada uurka leh inay weydiiso dhakhtarkaan ayaa waxaa ka mid noqon kara;
Goorma ayaan bilaabi karaa inaan qaato fitamiinada?
Ma caadibaa hadaan qaato wax daawo ah?
Miisaankayga oo kordha wax dhib ah miyuu ii keeni karaa?
Maxay yihiin cunooyinka aan iska ilaalinayo xiliga uurka?
Waa dhakhtar ku takhasusay barashada xanuunada ku dhaca maqaarka. Dhakhtarkaan ayaa sidoo kale wax ka yaqaana xanuunada ku dhaca timaha iyo cidiyaha. Waa dhakhtar muhiim gaar ah u leh haweenka. Waxuu haweenka ka caawin karaa xalinta xaaladaha kala duwan sida, finanka, cambaarta, iyo baraha maqaarka ee la xiriira da’da. Su’aalaha aad weydiin karto dhakhtarka noocaan ah waxaa ka mid noqon kara;
Sidee isaga ilaalin karaa finanka?
Kulaylka cadceedu wax dhaawaca miyuu u gaysan karaa jidhkayga?
Sidee isaga ilaalin karaa cambaarta?
Waa dhakhtar ku taqasusay ilkaha iyo ciridka. Dhakhtarkaan ayaa ah guud ahaan mid lagama maarmaan u ah dhamaan haweenka. Hagaajinta ilkaha iyo ciridku waa kuwo u baahan daryeel taxadarkiisa leh kaasoo u wanaagsan caafimaadka guud iyo muuqaalka haweeneydaba. Waxaa wanaagsan in lixdii biloodba mar la booqdo dhakhtarka noocaan ah maadama ilkuhu yihiin kuwo u nugul xanuuno badan, keeni karana khataro caafimaad darro. Su’aalaha loo baahan yahay in aad weydiiso dhakhtarkaan waxaa kamid noqon kara;
Imisa jeer baan u baahanahay inaan ilkahayga dhaqo/nadiifiyo?
Sideen uga hortagi karaa suuska ilkaha ku dhaca?
Macmacaanku ma wax dhib ah ayay u keenayaan ilkahayga?
Ma u baahanahay siliga ilkaha lagu xirto?
Joogteynta daryeelka caafimaadka ee haweenku waa mid muhiimad gaar ah leh, maadaama ay yihiin asaaska bulshada. Da’ walba oo ay jiraana waxay leedahay daryeel keeda goonida ah.
Previous PostWaa Maxay Oofwareen Next PostBurada minka